multifunction color sorter for coffee beans,multifunction agba sorter mkpụrụ kọfị
ALTRA Processor From USA, SAMSUNG Chip From Korea
Optical Sorting Machine (Mgbe ụfọdụ, a na-akpọ digital Sorting) na ọgụgụ isi na akpaka usoro Sorting nke siri ike ihe onwunwe iji ese foto na ejectors.
si Comprehensive ihe ọmụma na ubi nke kọfị mmepụta jikọtara na ya Creative ngwọta na-enye ihe kasị kọfị processsors elu uzu ngwọta.
si Optical Sorting technology enyere kọfị processors Aka Imeri agbasosi nri nchekwa na àgwà requirements.At n'otu oge ahụ, ọ na jirichaa Productivity na profitability.
Dabere na ụdị nke sensọ eji na software-akwagharị Intelligence of oyiyi nhazi usoro, Optical Sorting igwe nwere ike na-aghọta ihe 'na agba sorter na size.The-eji tụnyere ihe na-ọrụ na onye-kọwaa na-anabata / ajụ ibiere Amata na Wepụ agahie ngwaahịa na Foreign ihe onwunwe (FM) si mmepụta akara, ma ọ bụ na-anọpụ iche ngwaahịa nke dị iche iche akara ule ma ọ bụ ụdị ihe onwunwe.
CCD Agba Sorters na n'ọtụtụ ebe, mee ihe na nri Industry ihe n'ụwa, na e doro ya kasị elu na nhazi egbute ihe oriri pụtara kasị baa ụba, Mkpụrụ akụkụ, osisi, agwa, osikapa, pulses, ngwa nri, mkpụrụ, dehydrated vegetable.The technology na-ejikwa Waste Recycling na ịnweta sorting industry.Compared ka ntuziaka, nke bụ nke onye na-ekwekọghị ekwekọ, Optical sorting na-enyere mma ngwaahịa mma, jirichaa throughput na zaa Dịkwuo ezie na mbenata oru nleeta.
Optical Sorter igwe na ezigbo maka ịkpa ókè agbụrụ processors ụdị ọzọ dị iche iche iche mkpụrụ na dị iche iche nhazi stages.The Sorting nso adabara processors na ibe ina kasị mma.
Ngwa anya Sorting ngwọta maka
1, Green kọfị (agba Sorting): Optical Sorting nwere ike jụ agba ntụpọ pụtara kasị discolored agwa, ọmụmụ akabeghị aka na ụmụ ahụhụ ndị mebiri emebi na nkịtị agwa, ọpụrụiche kọfị na sundried green ngwa.
2, Green kọfị (FM Sorting): Optical Sorting na-ekwu Wepụ Foreign ihe onwunwe nke e Agbaghara ma ọ bụ na ezubere iche site Mechanical nhicha usoro pụtara kasị ruo, nkume, iko, shei na ndị ọzọ kpatara gbaa ụka usoro pụtara utoojoo agwa.
Arabica na Robusta kọfị ntụpọ
3, a ṅara n'ọkụ kọfị (agba Sorting): Optical Sorting nwere ike ikewapụ n'okpuru-ṅara n'ọkụ (Mkpa ọkụ, na-acha ọcha na ọmụmụ akabeghị) na n'elu-ṅara n'ọkụ agwa maka a Better uto na àgwà.
4, a ṅara n'ọkụ kọfị (FM Sorting): Wepụ ekwu ya FM (Ọzọ ihe onwunwe) pụtara ọtụtụ ruo, nkume na iko si ṅara n'ọkụ kọfị nke nwere ike ọ bụghị naanị imebi ọdịdị ikpeazụ ngwaahịa kamakwa ndị dị otú ahụ akụrụngwa Mechanical Mebiri pụtara kasị nēgwe nri.
Robusta kọfị ntụpọ
1, Near mmadụ anya na agba ọhụụ Sorting technology, na iji 16 nde na agba, na-ewetara ndị kasị mma arụmọrụ Sorting
2, Full-agba ese foto Optical usoro, na akụkụ akara nke ntụpọ, na-enye ohere 0.1mm Optical Mkpebi
3, image nnweta-enye ohere mfe ma ezi ọnọdụ nke ntụpọ Wepụ. Software ukpụhọde kpam akpaka ekele technology HSV
4, udi-sizing Integrated n'ime usoro
5, Kasị lekwasị jụrụ, ekele hi-tech ahaziri ejectors
6, N'atu mmepụta akọ, na-akpaghị aka usoro a akara ngwaọrụ feeder
7,-ekwe omume ka nwere imekotaotuugbo ngwaahịa Resort, ọbụna na agbara Sorting Sorting na-atọ.
8, ekwe omume ịgbakwunye sloping chutes sorter maka upgrading ma ọ bụ mmepụta Ụba
9, ekwe omume iji wụnye ese foto ọzọ Operating na NIR igwe mgbe nchekwa Na-arụ ọrụ na ogige
10, nke Mere ọkụ usoro na dijitalụ akara
11, Automatic ihicha usoro, na kemeghi Frequency na Duration
12, tilting Optical igbe, na-ekwe ka ihe dị mfe nnweta maka Internal Maintenance arụmọrụ
13, Airtight Optical igbe na-achịkwa okpomọkụ
14, E-arụzi ụgbọala n'emere The kasị elu nke ịdị ọcha na-egbochi ngwaahịa ìgwè ma ọ bụ outflow
15, Nyere Anyị na de-ehicha usoro mmiri
16,14-sentimita asatọ egosipụta na zuru-agba na aka-na ihuenyo ọtụtụ asụsụ
17, mgbanwe, na onye ọrụ-enyi na enyi
18, belata electric na abịakọrọ on Oriri.
19, OA asambodo
20, Jiri kacha mma mma components iji hụ magburu onwe ya mma.
21, Site na otu na-paseeji, a fan iri na isii chutes Aka Imeri ọ bụla dị iche iche na emeputa chọrọ ikike